Ny mpanao fihetsiketsehana EndSARS dia mihantsy ny governora Nizeriana
Ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny Rivers State, atsimon'i Nizeria, dia miroso mankamin'ny toeran'ny governemanta ao amin'ny renivohi-panjakana, Port Harcourt, ho fanoherana ny governora izay nandrara ny endrika fisehoan.
Ny governora Nyesom Wike dia nilaza tamin'ny Alatsinainy fa ny fihetsiketsehana #EndSARS dia tsy nilaina taorian'ny nitohizan'ny hetsi-panoherana tany amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena na dia teo aza ny fanaparitahana nataon'ny manampahefana ao amin'ny Brigade manokana miady amin'ny halatra (Sars), fantatra amin'ny ny fisamborana azy ary famonoana olona tsy ara-dalàna.
"Takiana ihany koa ny polisy hiantohana ny fampiharana ny fandrarana ary hitondrana ny fitsarana ireo mpandika lalàna", hoy ny mpitondra teniny. Paulinus Nsirim tamin'ny fanambarana navoaka tao amin'ny Twitter.
Saingy na eo aza ny fisian'ny polisy mavesatra dia mbola niseho tao amin'ny Pleasure Park ireo mpanao fihetsiketsehana - ny toerana nifanarahan'izy ireo teny amin'ny sisin'ny tanàna izay nanombohan'izy ireo nanao diabe tamina arabe iray. principale.
Fampidirana ara-tsosialy avy amin'ny Twitter
tatitraAmpandre io fampidirana sosialy io, apetraho fitarainana
Ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana, Gospel Orji, dia nilaza tamin'ny BBC fa handeha ho any amin'ny foiben'ny governemanta izy ireo hiresaka amin'ny governora momba ny fanambarany.
"Tsy fihetsiketsehana intsony io fa hetsika iray," hoy izy.
"Hasehontsika azy ireo fa an'ny vahoaka ny fahefana," hoy izy.
Mandeha ihany koa ny hetsi-panoherana any amin'ny fanjakana maro hafa ao amin'ny firenena, na eo aza ny fanomezan-toky avy amin'ny filoha Muhammadu Buhari tamin'ny Alatsinainy fa ny fandravana an'i Sars no dingana voalohany amin'ny fanavaozana ny polisy.
Tamin'io andro io ihany, sivily sy polisy iray no maty tany an-drenivohitra ara-barotra, Lagos, manontany ny fahatsoran'ny tompon'andraikitra hampitsahatra ny herisetra ataon'ny polisy.
Ny tanàna misy ny fihetsiketsehana amin'izao dia:
Tian'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fisamboran'ny manampahefana sy fanenjehana ireo polisy voarohirohy tamin'ny famonoana sy fanorisorenana ny olom-pirenena hatramin'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana tamin'ny herinandro lasa, mba hampisehoana ny maha-matotra ny fanavaozana ny polisy.
EXCERPT - Jonathan Lehmann: "Androany, ny firaisana dia hita ho fananan'ny mpanjifa" - Video
Côte d'Ivoire: toa an'i Douk Saga, DJ Arafat, maty tany am-piandohan'ny fiainana (RC 13 08 2019 P1) - Video